दाङलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको हब बनाउन सकिन्छ - Chetana Online
Chetana Online २ फाल्गुन २०७७, 3:14 am
नेपाल औषधी थोक व्यवसायी संघ
नेपाल औषधी थोक व्यवसायी संघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष शालिकराम आचार्य दाङलाई स्वास्थ्य उपचारको हब बनाउन सकिने बताउनुहुन्छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यबाट स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्न सकिने उहाँको भनाई छ । दाङमा स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था, थोक व्यवसायीहरुको समस्या, संघका आगामी योजना लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर चेतना अनलाइनका सम्पादक पाण्डव शर्माले आचार्यसँग गरेको कुराकानिको सार :
औषधी थोक व्यवसायी संघ दाङले अहिले के गरिरहेको छ ?
औषधी थोक व्यवसायी संघ नेपालभर रहेका सम्पूर्ण औषधी थोक व्यवसायीहरुलाई एकताबद्ध गरि उनीहरुलाई औषधी थोक व्यवसायका समस्या तथा चुनौतिहरुलाई न्यूनिकरणगरि स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक, मर्यादित र व्यवस्थित व्यवसायको अवधारणा स्वरुप गठन गरिएको संस्था हो ।
यो २०७३ साल फागुुन ७ गते विधिबत रुपमा नेपाल सरकारको संघ संस्था ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको व्यवसायीक संस्था हो । हालसम्म यो संस्थाको नेपालका ७ ओटै प्रदेशमा शाखा सञ्जाल विस्तार भइसकेको छ ।
दाङमा २०७६ पुस २ गते विधिबत रुपमा शाखा सञ्चालनको लागि अनुमति लिई कृयाशिल भइरहेको छ । हालसम्म दाङ जिल्लाभरीमा ३३ जना थोक औषधी व्यवसायीहरु संस्थामा आबद्ध हुुनुुहुन्छ ।
तपाईहरुको अहिलेको मुख्यएजेण्डा के हो ?
व्यवसायीको व्यवसायीक लगानी सुरक्षित गरि व्यवसायीलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक र मर्यादित बनाई सेवालाई जनउत्तरदायी बनाउँदै औषधीसँग सम्बन्धीत थोक तथा खुुद्रा व्यवसायीहरुको हकहित र संरक्षण गर्ने नै हाम्रो मुख्य एजेण्डा हो ।
थोक औषधी व्यवसायीहरुको अहिलेको समस्या के हो ?
थोक औषधी व्यवसायीको मुख्य समस्याको रुपमा उधारा ेकारोबारको प्रचलन नै हो । अहिले पनि हाम्रा व्यवसायीहरुको करोडौं रकम बजारमा भुुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ ।
यसले गर्दा थोक व्यवसायीको आर्थिक टूाञ्जिक्सनमा समस्या पर्न गएको छ । यसले गर्दा व्यवसायीक प्रबद्र्धनमा समस्या परिरहेको छ । त्यसैगरी कम्पनी तथा सुपरहरुको समयसमयमा हुने व्यवसायीक नीतिमा परिवर्तनको कारण आजको समयमा आउँदा औषधी खरिद गर्दा नगदमा खरिद गर्नुपर्ने, बिक्री गर्दा उदारोमा बिक्री गर्नुपर्ने, कतिपय सन्दर्भमा उदारो बिक्री भएको रकम लामो समय सम्म भुक्तानी हुन नसक्ने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको र थोक व्यवसायीहरुको व्यवसायीक नीतिमा एकरुपता कायम हुन नसक्दा कतिपय व्यवसायीको ठूलो परिमाणमा लगानी फसिरहेको समेत अवस्था छ ।
यी समस्या समाधान गर्न कसरी सकिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
सर्वप्रथम त हामी व्यवसायीले नै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाबाट व्यवसाय गर्ने कुरालाई आत्मसाथ गर्दै व्यवसायीसँग सम्बन्धीत सबै ग्राहकहरुलाई सुसुचित गर्ने र व्यवसायीक नीति निर्माण गरि कार्यान्वयन गर्न तत्पर हुुनुपर्छ ।
हामी यो बाटोमा अग्रसर छौं । केही सकारात्म परिणामहरु निक्लिरहेको महसुस गरिरहेका छौं । सामान्य हेराईले हाम्रो व्यवसायले सीमित व्यक्तिको लाभ भएको देखिएला तर, हामीले यसलाई गहन ढंगले बुुझ्न जरुरी छ । औषधी व्यवसाय आँफैमा सेवामुुलक व्यवसाय हो । हामीले दूरदराजमा अत्यावश्यक जीवन उपयोगी औषधीहरु पुु¥याइरहेका हुन्छौं ।
अहिले पनि औषधी व्यवसाय क्षेत्रमा नेपालभर लाखौंको रोजगार सुुनिश्चित छ । हामीले राज्यलाई ठूलो मात्रामा राजश्व तिरिरहेका हुुन्छौं । हाम्रो व्यवसाय मानिसको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएको छ । यस्तो प्रकारको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरुको लगानी सुरक्षाकालागि राज्यबाट पनि केही सहजिकरण गर्नुुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ । मुलुकको समृद्धिकालागि राज्य र निजी क्षेत्रबीच उचित समन्वय र सहकार्य हुन जरुरी छ ।
अहिले बजारमा यदाकदा दर्ता नभएका र बिक्रीबितरणका लागि बन्देज गरिएका औषधीहरु बिक्री भएको सुुनिन्छ । यसमा तपाईको संस्थाको के धारणा छ ?
आधिकारिक रुपमा दर्ता भएको पसलहरुबाट दर्ता नभएका तथा बिक्रीवितरणकालागि बन्देज गरिएका औषधीहरुको बिक्रीबितरण प्राय हुँदैन । तर, यदाकदा खुला सिमाका कारण छिमेकी मुलुकबाट केही लागु औषध कारोबार गर्ने अवैध व्यवसायीहरुल ेप्रलोभनका कारण केही घटनाहरु घटाएको देखिन्छ ।
यसलाई नियमन राज्यस्तरबाट पनि भएकै पाइन्छ । हामी यसलाई निरुत्साहित पार्न व्यवसायीहरुलाई सचेतनामुुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने अभियानमा छौं । उक्त अभियान सफल पारि लागु औषध दुव्र्यसनिबाट समाजलाई बचाउने र अवैध कारोबारलाई रोक्ने हाम्रो अभियानलाई राज्यको तर्फबाट थप सहयोगको अपेक्षा राख्दछौं ।
व्यवसायमा सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हुन्छ । तपाईहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत के काम गरिरहनुुभएको छ ?
व्यवसायीक संघ संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्व अवष्य हुन्छ । हामी दाङ जिल्लामा संस्था स्थापित भइसकेपछि विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणकालागि सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गरि अत्यावश्यक रहेका स्वास्थ्य सुुरक्षा सामाग्री सेवा प्रदायक कार्यलय तथा संघ संस्थाहरुमा निशुुल्क बितरण ग¥यौं ।
कोभिड–१९ को महामारी शुरुमा नेपालमा भित्रदा निकै त्रास थियो । त्यतिबेला माक्स तथा सेनिटाइजरको सर्वत्र अभाव भएको समयमा हामी हाम्रो जनशक्ति प्रयोग गरेर विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुुसारको सुत्र प्रयोग गरी स्थानीय तहमै हेण्ड सेनिटाइजर उत्पादन गरेर बितरण गरेका थियौं । त्यसैगरी उक्त समयमा अहोरात्र खटिने सुरक्षाकर्मीहरुका लागि प्राथमिक उपचार सामाग्री बक्स जिल्ला प्रहरी कार्यालय मार्फत स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच भन्दा टाढा रहेका प्रहरी चौकिहरुमा प्रदान ग¥यौं ।
सम्पूर्ण खुुद्रा तथा थोक औषधी व्यवसायीहरुको व्यवसायीक प्रवद्र्धनका लागि औषधीको समुचित प्रयोग, सरकारी ऐन नीयमको पालना, मनोदिप औषधीहरुको बिक्रीवितरणमा उचित व्यवस्थापन तथा लेखाप्रणाली व्यवस्थापन र राजश्व नीति सम्बन्धमा व्यवसायीक अभिमुुखिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा राप्ती अञ्चलभरीका दुुई सय ५० जनाभन्दा बढी व्यवसायीहरु सहभागिता थियो ।
हामीले महामारिको बेलामा औषधीको सहज आपूर्तीका लागि संस्थाले उचित पहल गरि दाङ जिल्लामा औषधीको अभाव हुनबाट जोगाएको थियो ।
दाङ साविकको राप्ती अञ्चलको केन्द्रविन्दु हो । अहिले लुुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङमा घोषणा गरिएको छ । क्रमशः यहाँको जनघनत्व पनि बढ्ने देखिन्छ । साथै अहिले स्वास्थ्य संस्थाहरु खुल्ने र स्तरबृद्धि हुने क्रम पनि बढिरहेको छ ।
आगामी दिनमा दाङ स्वाथ्य क्षेत्रकै हब बन्ने देखिन्छ । हामीले यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकाशका लागि आगामी दिनमा थप कदमहरु चाल्नुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि मुख्य जिम्मेवार राज्य नै हो ।
राज्यलाई सहयोग गर्नु हामी निजी क्षेत्रको पनि दायित्व हो । हामीले दाङलाई वास्तविक रुपमा स्वास्थ्य क्षेत्रको हब बनाउनकालागि विज्ञहरुको समूह गठन गरी कृयाशिल हुन जरुरी ठानेका छौं । त्यसले यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि दीर्घकालीन गुरुयोजना सहयोग पुुग्ने अपेक्षा गरेका छौं । हामी त्यो विज्ञ समूह गठनका लागि मध्यस्थता गर्न तयार छौं ।
हामीले विपन्न वर्गका जनतालाई पनि स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुु¥याउनका लागि स्वास्थ्य सुरक्षा कोष स्थापना गरी सेवा पुु¥याउने उद्देश्य राखेका छौं ।
हामीले सम्पूर्ण थोक तथा खुद्रा व्यवसायीहरुको व्यवसायीक प्रवद्र्धनका लागि आवश्यकता अनुसारका विषयबस्तुहरुमा व्यवसायीक अभिमुखिकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने छौं । व्यवसायीक हकहित र संरक्षणका लागि हामी सम्बन्धीत पक्षहरुसँग मिलेर सधै कृयाशिल भइरहने छौं ।